अब जापानमा एजीटीले नेपाल वायुसेवा निगमको टिकट बेच्ने…::Leading Nepal News
साउन २२, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)ले जापानमा टिकट बिक्री गर्न त्यहाँको एडभान्स ग्लोबल ट्रान्सपोर्ट (एजिटी) लाई प्यासेन्जर सेल्स एजेन्ट (पिएसए) नियुक्त गरेको छ । निगम व्यवस्थापनले एजीटीलाई टिकट बिक्री गर्ने एजेन्टका रुपमा नियुक्त गरेको निगमका सहप्रवक्ता सुलेख मिश्रले जानकरी दिए । यो जापानको प्रख्यात ट्राभल कम्पनी एचआईएस कम्पनी लिमिटेडको सहायक कमपनी हो । एजीटीले काठमाडौँ–ओसाका–काठमाडौँ रुटको टिकट बिक्री गर्ने निमगको वाणिज्य विभागका निर्देशक टंकनिधि दाहालले बताए ।यो रुटमा निगमले हाललाई प्रवद्र्धनात्मक भाडा दर ७२ हजार हाराहारी (दुईतर्फी) घोषणा गरेको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा सुरज कुँवरले लेखेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्..वडाध्यक्ष डीभी परेर अमेरिका उडेपछी वडावासी पुगे निर्वाचन आयोग:- हेटौंडा- एकताका डीभी–पीआर लिएकाले देशलाई माया गर्दैनन्, यसले राष्ट्रिय भावना घटाउँदै लगेकाले कर्मचारीलाई डीभी–पीआर निषेध गर्न आवश्यक देखिएको प्रसङ्ग केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्मै चर्कोरुपमा उठेको थियो । यसको असर परेको थियो – केही ठूला पदधारी सरकारी कर्मचारीलाई । उनीहरू सेवा छाड्न विवश भए । यसबारे विधेयक तयार गरेर १३ जेठ २०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो । ‘ग्लोबलाइजेसनको युगमा यस्ता कुरालाई रोकेर हुन्छ ?’ प्रतिपक्षले सरकारसमक्ष आक्रोश पोखेको थियो ।‘हामी राष्ट्रप्रति समर्पित हुन्छौं कि हुँदैनौं ? परिवर्तन चाहन्छौं कि चाहँदैनौं ? हाम्रो प्रशासन सुधार हुन्छ कि हुँदैन ? राष्ट्रप्रति गौरवान्वित र जनताप्रति इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ हुन्छौं कि हुँदैनौं,’ डीभीबारे चर्चित मन्त्री लालबाबु पण्डितले भन्नुभएको थियो ।यी त भए सरकारी कर्मचारीतर्फका कुरा तर मकवानपुरको एक गाउँपालिकाका जननिर्वाचित वडा अध्यक्ष नै डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डीभी) धारी भएर सपरिवार अमेरिका गएपछि नागरिक र सरकार र निर्वाचन आयोगले अब के गर्ला ?यसै प्रसङ्गमा मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–८ का स्थानीयले वडा अध्यक्षको उपनिर्वाचन गर्न भन्दै सोमवार जिल्ला निर्वाचन आयोग कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । वडाध्यक्ष जगत्मान घिसिङ डीभी परेर परिवारसहित अमेरिका गएपछि रिक्त वडा अध्यक्षमा उपनिर्वाचन गराउन निवेदन दिइएको हो । स्थानीयले संयुक्तरुपमा वडा अध्यक्षको उपनिर्वाचन गराउन माग गर्दै निर्वाचन कार्यालय मकवानपुर र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडामा निवेदन दर्ता गराएका हुन् । वडा सदस्य नवराज अधिकारीलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर २०७५ चैत २७ गते वडा अध्यक्ष घिसिङ परिवारसहित अमेरिका उडेपछि स्थानीयको कामकारबाहीमा प्रभाव परेको भन्दै स्थानीयले उपनिर्वाचन गराउन निवेदन दिएका हुन् । गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामाले उहाँ (घिसिङ) ले राजीनामा नदिएको दाबी गरे । ‘वडा अध्यक्षज्यू पारिवारिक व्यवस्थापनका लागि मात्र जानुभएको हो । करीब १ महिनाभित्र उहाँ स्वदेश फर्किनुहुनेछ,’ उनले भने, ‘घिसिङले कार्यको जिम्मेवारी दिएर जानुभएकाले जनताका काम रोकिएका छैनन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष लामाको दाबी छ । उनको दाबीलाई स्थानीय मान्न तयार छैनन् । भन्छन्, ‘यसरी कानूनविपरीत पद रिक्त राख्न मिल्दैन ।’
स्थानीयले दिएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन ऐनअनुसार बढीमा ३ महिनासम्म कार्यवाहक दिन पाइने व्यवस्था रहेको बुझिएकाले ४ महिना नाघिसक्दा पनि आफूखुशी परिवारसहित उतै काम गरी बसेकोले छानबिन गरी मंसिर १४ गते हुने भनिएको उपनिर्वाचनमा पदपूर्ति गराउन आग्रह गर्दछौं ।’ उपनिर्वाचनको सूचीमा मकवानपुर छैन । तत्कालीन नेकपा एमालेबाट उठेका घिसिङले ५ सय १४ मत ल्याएर जितेका थियो । उनका प्रतिस्पर्धी राप्रपाका सुन्दर कुँवरले २ सय २३ र नेपाली कांग्रेसका दीपेशकुमार विश्वकर्माले १ सय ९१ मत ल्याएको बताइएको छ । जनप्रतिनिधि केही समयका लागि भ्रमणमा जान मिलेपनि लामो समयसम्म जनताको कामकारबाहीमा असर पर्ने गरी विदेशमा काम गरेर बस्न नमिल्ने कानून व्यवसायीले बताएका छन् । ५ वर्षसम्म जनताको काम गर्न चुनिएका जनप्रतिनिधि डीभी परेर परिवारसहित विदेशमा रही काम गरिरहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गराउन निर्वाचन कार्यालय लाग्नुपर्ने निवेदक स्थानीयको दाबी छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।